Lanvin - - मा युरोप सबैभन्दा पुरानो फेसन घरहरू एक को संस्थापक 22 वर्षीय Frenchwoman थियो Jeanne Lanvin, 1890, ह्याट दोकान खुलेको छ। सिर्जना गरिएको छ यसको मोडेल को परिष्कृत र परिष्कृत डिजाइन दुकानदारों मूल्यांकन गर्छन्। Jeanne एकदम नम्र भई बस्ने भएकोले आफ्नो परिवारलाई लुगा सी गर्न त्यो थियो कि। यो गतिविधि त्यो मन पराएका, तर त्यो आफ्नो सानो छोरी को लागि पोशाकहरू सिर्जना गर्ने, एक विशेष खुशी प्राप्त - Merzherit।
लागि बच्चा Jeanne ती दिनमा अनुकूलन थियो, वयस्क लुगा को सानो प्रतिहरू sewed। त्यो कपडा संतृप्त रंग र बच्चाको वस्त्र गर्न उपयुक्त हो कि सजावट प्रयोग गरेर विशेष उडान र हावा लुगा सिर्जना गरियो। फलस्वरूप, Joan वयस्क र छोराछोरीको फैशन विभाजित गर्न सक्षम थियो जो संसारको पहिलो डिजाइनर, भयो।
Joan त्यो, कला प्रेम Renoir र Viyyara कामहरू प्रशंसा, धेरै राम्रो र रचनात्मक प्रकृति थियो। यो उनको काम प्रतिबिम्बित हुन सकेन। यसलाई उच्च समाज को लागि एक ठूलो लुगा सिर्जना गर्छ। कर्पोरेट रंग घर Lanvin - बैजनी रङ्ग संग लैवेंडर।
1913 मा, Jeanne भारी र रस्मी कपडे, को गोलीगाँठो गर्न प्रकाश कपडे को एक पेरिसियन थकित प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले धेरै लोकप्रिय बन्न र ठूलो मांग गर्दै छन् छन्। लोकप्रियता Lanvin घर तेजी बढ्दै छ।
1925 देखि, Jeanne अत्तर सुगंध सिर्जना आफ्नो हात प्रयास सुरु हुन्छ। अर्को केही वर्ष मा, कम्पनी समाज को विभिन्न तहहरू आफ्नो admirers भनेर विभिन्न सुगंध को एक श्रृंखला उत्पादन गर्छ। क्लासिक शैली मा Lanvin अत्तर लाइन, त्यसैले खरीदारों को भाग मा मा ब्याज वर्ष आउन लागि जारी हुनेछ भन्ने तथ्यलाई पूर्ण विश्वस्त छ।
दिग्गज स्त्री अत्तर Arpege, को aldehyde पुष्प गंध बुझाउँछ जो - 1927 मा, कम्पनी आफ्नो कृति सिर्जना गर्छ। यो गीत को लोकप्रियता perfumery को कला को धेरै मालिकको को ईर्ष्या हुन सक्छ। यो दशकमा यसको शोभा संग fascinates एक क्लासिक छ।
Eclat घ Arpege को संरचना प्रसिद्ध खुशबू को एक नयाँ व्याख्या रूपमा 2002 मा सिर्जना गरिएको थियो। बादल मडारिरहेको प्रकाश गुलाबी को पहिलो पातलो पट्टी देखिन्छ र हावा शुद्धता भरिएको छ जब आत्माको, बिहान पेरिस गर्मी को सौन्दर्य embodied जो धेरै नै सूक्ष्म र नाजुक गंध, छ।
Eclat घ Arpege Lanvin यो ठूलो ब्रान्ड को निर्माता र प्रतिष्ठित खुशबू को 70th वार्षिकोत्सव एक आदर रूपमा सिर्जना गरिएको थियो।
शानदार संरचना Lanvin Eclat captivates र आकर्षण सबै Arpege घ। यो नाजुक पुष्प टिप्पणीहरू गर्न indifferent रहने थियो जो एक महिला कल्पना गर्न कठिन छ। कुनै तामझाम, ठिक्क यो सबै - यो गन्ध अद्वितीय छ।
शीर्ष टिप्पणीहरू Eclat घ Arpege कोमल बकाइन सुनिन्छ र सिसिली कागति रसदार पातहरू खुशबू को हृदय रातो peony, विस्टेरिया फूल glows र आरु स्वाद musk, अम्बर र को कर्डहरु को लुपमा पूरा मा लेबनान को देवदार।
गंध Eclat आकाश बिस्तारै फिक्का बकाइन टोन मा रंग गर्दा यस्तै पेरिस प्रारम्भ Arpege घ, र हावा सुगन्धित ताजगी छ।
बोतल Eclat घ Arpege एकदम मूल छ। अद्वितीय स्वाद एक गोलाकार आकृति, इत्र र हाउते Couture को संघ प्रतीक जो एक ठूलो सेतो पत्थर र दुई धातु रिङ द्वारा पहनाया छ जो एक बोतल मा संलग्न छ।
शौचालय पानी, एक क्लासिक बन्ने - "Kenzo"
एक पुरुष अत्तर कसरी चयन गर्ने?
थाई नरिवल तेल: आवेदन, गुण, फोटो
अरमानी कोड - पनि व्यापार महिला मा निहित जुनून
काजल "पुतली पंख" ( "l'Oreal") को समीक्षा, मूल्य
उदाहरण declarative वाक्य र आफ्नो syntactic सुविधाहरू
जब दिन एंजेला Alexandra?
भविष्यमा रूस के पर्खिरहेको: जो सही छ?
Naiz (ट्याब्लेट) - निर्देश पुस्तिका।
छोराछोरीमा कोणविकेटिटिजको उपचार कस्तो छ?
मास्को मा रेस्टुरेन्ट "Mayakovsky" "Sakura Blooming": समीक्षा
पोस्ता संग मिठो रोटी: नुस्खा
अग्रगामी - सोभियत संघ को पायनियर्स छ ...
Curd क्रीम संग केक